Mgbasawanye Obodo, 2011 Isiokwu - Geofumadas
Jenụwarị, 2011 Cartografia, Google Earth / Maps, innovations
Ihe omume nke omume igwe mmadu ga - adi n'omume nke afo a -na ndị na-esonụ- n'ihi na enweghi ọtụtụ ihe ị ga-eme iji dozie ihe ngwọta n'ụwa niile. Nlekọta afọ a maka National Geographics bụ ọnụ ọgụgụ zuru ụwa ọnụ n'ehihie nke imezi ijeri asaa. Okwu nke Jenụwarị bụ kpochapụwo ndị nchịkọta.
Ụlọ Lincoln Institute of the Policies Atumatu akwadebela ọtụtụ ihe omume na ihe nchoputa nke sitere na otu omumu nke obodo 3,000 nke kariri umu 2000 bi na 100,000 afo.
Akwụkwọ kacha amasị m bụ akwụkwọ a kpọrọ Ime ohere maka mbara ala nke obodo. Akụkọ na-adọrọ mmasị nke na-enyocha gara aga, ugbu a na ọdịnihu nke uto obodo ukwu zuru ụwa ọnụ. Ọ na-atụpụta ụkpụrụ ọhụrụ nke otu anyị kwesịrị isi kwadebe maka uto na afọ ndị na-abịanụ.
Nnukwu ọrụ nke Angel, Shlomo, na Jason Nne, Daniel L. Civco, na Alejandro M. Blei. Enwere ike ịzụta ya na mbipụta maka US $ 15 wee budata ya na pdf usoro n'efu (naanị ị ga-edebanye aha na ibe ahụ). Maka afọ 2012 mbipụta nke ihe akpọrọ Ọganihu nke Obodo, nke ga-abụrịrị atụmatụ dị mma nke kwesịrị ịgụnye ụdị Obodo nhazi, nke na-echetara m ụkpụrụ nke CitiVilles nke Facebook nakwa na ọ dị ize ndụ ịmepụta ọgba aghara ndọrọ ndọrọ ọchịchị ọhụrụ n'ihi na ọ bụ ezie na ọ bụ ihe na-adọrọ mmasị, ọtụtụ ndị na-ele ya anya dị ka ụdị ọhụrụ nke colonialism.
Ihe omuma nke Lincoln Institute, mgbe nile n'isiokwu a Atlas nke mmeba obodo. Nke a bụ nnakọta nke ozi dị oke ọnụ maka nbudata nwere maapụ n'ụdị onyonyo, kml na xls sheets nke jere ozi dịka ntọala maka owuwu nke -na ndị ọzọ- akwụkwọ ndị anyị kwuru n’elu. Enwere data na usoro GIS iji gụọ site na mmemme GIS.
A haziri nke a n'ime ngalaba ise:
1. Akụkụ mbụ, enwere foto jpg n'ụdị abụọ esere ede iji bipụta ya na akwụkwọ mmado. Otu onyonyo bu nke onu ogugu na eserese eserese, eserese ndi ozo eji eme obodo eji eme ihe site na ihe ngosi ihe omimi na ihe onyonyo na mpaghara obodo Obodo 120 na oge abụọ: Otu were 1990 were nke abụọ afọ iri gachara na 10.
Eserese dị n’elu na-egosi ọnọdụ obodo iri abụọ na otu ahụ, ụcha ya bụ mpaghara ka ọmụmụ a na-ekewa. Dịka ọmụmaatụ m hapụrụ gị ụzọ si Madrid.
2. Akụkụ nke abụọ nke atlas na-agụnye ọmụmụ banyere mmụba akụkọ ihe mere eme nke ndị mmadụ Obodo 25, Na-enyocha map site na 1800 ruo na njedebe nke narị afọ a ka mechara. E kesara obodo 25 a, dị ka eserese ngosi ndị a: 7 na America, 4 na Europe, 6 na Africa, 12 na Asia na 1 na Oceania.
Ihe osise ndị dị n’okpuru bụ ihe atụ nke obodo mepere emepe nke Mexico. N'aka ekpe bụ mpaghara ndị mpaghara obodo kpuchitere site na 1807 ruo 2000, na n'aka nri, enwere ọnụ ọgụgụ ndị bi na ya, hectare kpuchiri, grafụ njupụta na map ochie.
3. Nkebi nke ato Ọ gụnyere tebụl na Excel na data niile na-akwado ọrụ nke obodo 15 na 120. Ahụkebe, ebe ọ bụ na nzacha Excel na-eme ka ọ dịrị anyị mfe ịhụ data a dịka ọdịmma anyị si dị.
4. Nkebi nke anọ gụnyere data a ga-elele na mmemme GIS. Ma nhazi mpaghara geometries na .shp .dbf na .shx oyi akwa ele ọ bụla omume, yana .prj faịlụ maka georeference, .img maka raster ngosi na .lyr ele oyi akwa na theming na Ọdịdị Njirimara ArcGIS.
5. Akụkụ nke ise Ọ na-agụnye ozi nke obodo 3,646 na akwụkwọ Excel nakwa na faịlụ zipụ na mpaghara obodo niile a mụrụ, ka iji anya nke uche hụ ya na usoro GIS ma ọ bụ Google Earth.
Na nkenke, ihe bara uru nke nwere ike ịba uru maka ụmụ akwụkwọ, ndị ọrụ ọha na eze, ndị nchọpụta, ndị nhazi na ndị na-etinye aka na nsogbu akụ na ụba na akụ na ụba.
Atlas na akwukwo a na-enye usoro ihe omuma na, odi ka nke mbu, ihe omuma banyere ihe gara aga, ugbua na nke di n’iru nke obodo mepere emepe n’obodo nile di n’uwa. Ọ na-emepe echiche nke ihe ịma aka anyị na-amaghị etu esi arụ n'ime iri afọ ndị sochirinụ.
Maka ugbu a, anaghị m ahụ ma ọ bụrụ na ọ nwere ike ịzụta ya na CD ma ọ bụ DVD, n'ihi na nbudata ahụ ga-eme n'otu n'otu.
Previous Post«Previous Gajes nke Mbugharị na Geofumadas.com
Next Post Otu esi amata mgbe Google na-eme ihe ngosi site na ebeNext »